Tanàna tsara indrindra eran-tany ho an'ny zavakanto an-dalambe - avy any New York City ka hatrany Paris
Home » Lahatsoratra farany farany » Kolontsaina » Tanàna tsara indrindra eran-tany ho an'ny zavakanto an-dalambe – manomboka any New York ka hatrany Paris
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Kolontsaina • Vaovao • People • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Tanàna tsara indrindra eran-tany ho an'ny zavakanto an-dalambe – manomboka any New York ka hatrany Paris
Tanàna tsara indrindra eran-tany ho an'ny zavakanto an-dalambe - avy any New York City ka hatrany Paris.
Lasa malaza ny zavakanto an-dalambe, ary ankehitriny dia ampahany eken'ny maro amin'ny fiainana an-tanàn-dehibe amin'ny taonjato faha-21.
Venezia dia maka ny toerana ambony indrindra, ho tanàna tsara indrindra amin'ny ankapobeny ho an'ny zavakanto sy kolontsaina eto amin'izao tontolo izao. Ny tanàna koa dia fonenan'ireo tsangambato sy sarivongana ara-javakanto indrindra, ary manana tranobe manan-danja ara-javakanto isaky ny olona iray tapitrisa noho ny tanàna hafa.
I Santa Fe, Etazonia, no tanàna manana galeran-javakanto be indrindra. Santa Fe ihany koa no manana ny ankamaroan'ny tranombakoka, miaraka amin'ny malaza indrindra ao anatin'izany ny Georgia O'Keeffe Museum sy ny New Mexico Museum of Art.
Vienne dia mitaiza ny taranaka vaovao manana saina ara-javakanto lehibe miaraka amin'ny ampahany betsaka amin'ny oniversite zavakanto & famolavolana.
Manomboka amin'ny sangan'asan'i Banksy, ka hatramin'ny sangan'asa mavitrika ataon'ireo mpanakanto eo an-toerana ho avy, ny zavakanto an-dalambe dia nanjary nalaza, ary ankehitriny dia ampahany eken'ny fiainana an-tanàn-dehibe amin'ny taonjato faha-21 ny maro.
Saingy, iza amin'ireo tanàna no tompon-daka amin'ny zavakanto an-dalambe, ary aiza ny toerana tsara indrindra hankafizana azy?
Tanàna eran-tany 40 no nijery vao haingana, fantatra indrindra amin'ny sehatry ny zavakanto tsy manam-paharoa, mamakafaka ireo tanàna manana lahatsoratra Instagram #streetart betsaka indrindra ary Google fikarohana nandritra ny herintaona, manambara ny tanàna tsara indrindra eran-tany ho an'ny zavakanto an-dalambe.
Tanàna 10 ambony indrindra manana 'art an-dalambe' Instagrammed
(Ny isan'ny lahatsoratra Instagram ahitana tenifototra mampiasa ny anaran'ny tanàna arahin'ny teny hoe “zavakanto an-dalambe”).
laharana fihetseham-po Total isan'ny Street Art Instagram Posts
Na dia tsy tafiditra tao amin'ny 3 ambony aza i Etazonia, dia nanjaka tamin'ny ambiny tamin'ny 10 ambony izy ireo, miaraka amin'ny New York City, Miami, Los Angeles, Chicago ary San Francisco dia samy manaporofo ny toerana malaza amin'ny sehatry ny zavakanto an-dalambe.
Ny foibe ara-javakanto malaza amin'ny Paris, no tanàna nahazo isa ambony indrindra tamin'ny isan'ny lahatsoratra Instagram zavakanto an-dalambe, izay nahatratra 64,000. Ny zavakanto an-dalambe any Paris dia tsy mbola velona sy mavitrika kokoa noho ny ankehitriny, fonenan'ny mpanakanto toa an'i Jef Aérosol, afaka mahita ny sasany amin'ireo sary an-drindrina tsara indrindra ianao ao amin'ny The Canal Saint-Denis sy Belleville park.
Berlin dia hita fa manana ny lahatsoratra Instagram momba ny zavakanto an-dalambe faharoa indrindra, miaraka amin'ny totalin'ny 39,000. Renivohitry ny zavakanto an-dalambe i Berlin nandritra ny taona maro, miaraka amin'ny zavakanto an-dalambe manerana ny ilany andrefana amin'ny rindrin'i Berlin manome sehatra Instagram malaza.
Londres ny laharana fahatelo. Lasa anisan'ny toetran'ny tanàna ny zavakanto an-dalambe any Londres, miaraka amin'ireo mpizahatany mitsidika avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao mba hijery ireo zavaboary miavaka manerana an'i Brick Lane sy Camden.
Ny fikarohana ihany koa dia nanambara ny tanàna 5 ambony indrindra mikaroka ny 'kanto an-dalambe' indrindra:
(Ny isan'ny nikarohana ny anaran'ny tanàna narahin'ny teny hoe "kanto an-dalambe" tao amin'ny Google teo anelanelan'ny Septambra 2020 sy Aogositra 2021)
laharana fihetseham-po Ny totalin'ny Fikarohana Google Street Art
Maka ny toerana ambony indrindra amin'ity indray mitoraka ity dia i Londres, miaraka amin'ny fitambaran'ny fikarohana zavakanto an-dalambe 524,000 isan-taona. Ny tanàna dia mirehareha amin'ny sangan'asan'ny artista tsy mampino, ary ankehitriny dia maro ireo mpitari-dalana fitsangatsanganana no noforonina mba hanampiana ireo mpizaha tany amin'ny tanàna hivezivezy amin'ny sasany amin'ireo tsara indrindra.
Venice maka ny toerana ambony indrindra, ho tanàna tsara indrindra amin'ny ankapobeny ho an'ny zavakanto sy kolontsaina eto amin'izao tontolo izao. Ny tanàna koa dia fonenan'ireo tsangambato sy sarivongana ara-javakanto indrindra, ary manana tranobe manan-danja ara-javakanto isaky ny olona iray tapitrisa noho ny tanàna hafa.